La Résidence Amboara Tsifoina: manamafy ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka | NewsMada
La Résidence Amboara Tsifoina: manamafy ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka
Efa mivoatra manaraka ny toetr’andro ny fibeazana. Mila koloina koa ny fifandraisan’ny ankizy sy ny ray aman-dreny mba ho feno ny fitaizana. Tanjon’ny La Résidence amin’ny alalan’ny hetsika iarahanan’ny roa tonta manao izany.
Nampahafantatra ny asa nataony taorian’ny telo volana voaloahany nisokafany ny toeram-panabeazana La Résicence Amboara Tsifoina, eny Ambodivoanjo. Miavaka amin’ny maro ity toerana ity satria natao indrindra hanamafy ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin’ny alalan’ny fanaovana zavatra iray miaraka. Ohatra ny fanamboarana sakafo iarahan’ny reny na ny ray sy ny zanaka vavy, fianarana mandihy, fanaovana teatra, fianarana tenim-pirenena vahiny, fampianarana vonjy taitra, fampiroboroboana ny fahatokisan-tena sy ny mampiavaka ilay olona iray (ho an’ireo efa lehibebe), hoy ny fanazavan’ny mpitantana ny toeram-panabeazana, Ranoarivony Noussyh Seheno, ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny foiben’ny La Résidence.
Sokajin’olona maromaro mitambatra no mampihodina ny toerana, ahitana psychologue satria natao handraisana ankizy sy tanora. Manampy azy ny coach sy ny mentor (izay olona iray manana ny fahaiza-manao amin’ny taranja na sehatra iray ao amin’ny toeram-panabeazana). Ny coach kosa mitantana olona iray manampy azy hivoatra hanatratra tanjona ary miara-mamaritra aminy ny fomba hahatongavana amin’izany. 18 izy ireo ary samy manana ny mampiavaka azy avokoa.
30 amin’izao fotoana izao ny ankizy sy ny ray aman-dreny manaraka ny hetsika rehetra atolotry ny la Résidence. Noho ny rotorotom-piainana, tsy manana fotoana hifaneraserana be intsony ny mpianakavy ka izay no ezahina noforonina ao anatin’ny hetsika iraisana.